भ्रममा नपर्नुहोस् ! अब भारु साटिने छैन « Himal Post | Online News Revolution
भ्रममा नपर्नुहोस् ! अब भारु साटिने छैन
प्रकाशित मिति : २०७३, ४ पुष ०८:५६
४ पुस, काठमाडौं । तत्कालका लागि नेपालीसँग भएको ५ सय र १ हजार दरका भारतीय नोट नसाटिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक-पटक आग्रह गरे पनि भारतीय वित्त मन्त्रालयले बेवास्ता गरेपछि तत्कालका लागि नोट नसाटिने निश्चित भएको हो ।
भारतमा पुस १६ गतेसम्म नोट साट्ने अवधि छ । भारतीय पक्षले नेपालीसँग भएको भारतीय नोट साट्ने कुरमा खासै चासो नदिएका कारण नेपाली टोली भारत जान सकेको छैन । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीले अहिलेसम्म नेपालले भारतीय पक्षबाट आउने जवाफ कुरेर वसिरहेको वताएका छन् ।
यसअघि ठूला दरका भारतीय रुपैयाँ साट्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाएर भारत जाने टेपुटी गभर्नरले वताएका थिए । आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।
शुक्रबारदेखि सवारीसाधनमा जोर बिजोर लागु, यस्ता छन् अन्य आदेश
काठमाडौं । शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सवारीसाधनमा जोर–विजोर प्रणाली लागु हुने भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण
एमालेले संसद पनि चल्न नदिने, ‘अर्ली इलेक्सन’ पनि हुन नदिने संकेत
काठमाडौं। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले वैशाखभित्र स्थानीय चुनाव नभए संविधान र कानून उल्लंघन हुने भन्दै
मन्त्री रेणु यादवलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग
काठमाडौं । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्रीमती रेणु यादवलाई
बतासलाई ३ करोड क्षतिपूर्ति दिन सरकार तयार !
योगेशले हतियार तस्करी गरेर काठमाडौँमा घर बनाएको आरोप
एकपछि अर्को तनावमा केपी ओली